Fanadinana bakalorea : raisina ora roa mialohan’ny fanombohana ny mpianatra - ewa.mg
News - Fanadinana bakalorea : raisina ora roa mialohan’ny fanombohana ny mpianatra
Hotanterahina ny alatsinainy 19
oktobra izao ny fanadinana bakalorea manerana ny Nosy. Nametraka ny
lamina mano­kana ny minisiteran’ny Fampi­anarana mbony sy ny
fikaro­hana siantifika hiatrehana ny fepetra ara-pahasalamana izay
tsy maintsy arahina.
Ora roa mialohan’ny ha-nombohan’ny fanadinana dia efa mandray ireo
mpiadina eny amin’ireo foibem-panadinana ireo tompon’andraikitra
manao ny fandaminana. Afaka ma­nomboka ny fanasan-tanana amin’ny
savony, ny fitsapana ny maripana ary ny fanaovana « gel
désinfectant » amin’ireo mpiadina izy ireo.
Tanjona ny hisorohana amin’ ny mety ho fahataran’ny fanadinana,
indrindra mba hialana amin’ny famoriana na koa fampilaharana be
ireo mpiadina. Ity fepetra farany ity, izay mifanaraka amin’ny ady
amin’ny aretina Covid-19 sy ny hamehana ara-pahasalamana.
Koa noho izany, nampitomboina ny faharetan’ny fotoana fiantsoana sy
ny fiomanana rehetra ary raisina ny mpiadina hatramin’ny fizarana
ny laza adina, atao amin’ny 7 ora maraina sy amin’ny 1ora sy sasany
Raha misy mpiadina voamarina fa voan’ny Covid-19 nefa tsy mitondra
ny soritr’aretina ka maniry ny hanohy ny fanadinana dia mila
mampilaza haingana ny lehiben’ny tobim-panadinana fa atokana efitra
izy mba hahafahany manatanteraka hatrany ny fanadinana.
L’article Fanadinana bakalorea : raisina ora roa mialohan’ny fanombohana ny mpianatra a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 10/10/2020
Akon’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao – Toamasina: nahazo vahana ny tsatok’antsy, miisa 21 ireo maty
Mitotaly 21 ny isan’ireo olona namoy ny ainy tao Toamasina, nandritra ny fankalazana ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao. Vehivavy ny 10 amin’ireo raha lehilahy kosa ny ambiny. Tsatok’antsy ny tena nahazo vahana tamin’izany, araka ny fanazavan’ny mpitsabo… Fety tsy ialana loza! Nahazo vahana ny tsatok’antsy sy ny ady an-dalambe nandritra ny fankalazana ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao tao Toamasina raha ny tatitra voaray tao amin’ny sampana vonjy taitra ao amin’ny Hopitalibe Toamasina. Raha ny antontanisa nomen’ireo mpitsabo niandry raharaha tao amin’ny hopitaly, ny faran’ny taona sy ny fiandohan’ny volana janoary, nahatratra 21 ny ratra vokatry ny tsatok’antsy nataon’ireo jiolahy mpanendaka teny rehetra teny. Teo koa ny tsatok’antsy nataon’ireo miady an-dalana sy anaty trano fanaovana lanonana, raha somary nihena kosa ny ratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana satria tsy nisy afa-tsy roa izany tao anatin’ireo roa andro ireo. Roa ireo fianjerana teny an-dalana raha dimy kosa ny fianjerana tao an-tokantrano ary telo ny faharatrana vokatry ny asa, iray ny tsy fahatsiarovan-tena noho ny fisotroana diso tafahoatra toaka.Olona telo nitsoaka ny hopitaly…Nohamafisin’ny mpitsabo ao amin’ny sampana vonjy taitra fa amin’ny ankapobeny, nahatratra 87 ny olona tsy maintsy nandalo fizaham-pahasalamana maika tao amin’ny sampana vonjy taitran’ny Hopitalibe ka ny 33 amin’ireo, tsy maintsy naiditra hopitaly raha manaraka fitsaboana ivelan’ny hopitaly kosa ny ambiny, olona roa kosa nandositra ny toeram-pitsaboana, olona telo namoy ny ainy (efa maty ivelan’ny hopitaly).Fa ankoatra izany, nirongatra ny fahatesana tany an-tokantrano izay tsy nandalo tao amin’ny hopitaly araka ny tatitra nampitain’ny teo anivon’ny BMH-n’ny kaominina ambonivohitr’i Toamasina, ny 31 desambra teo ka hatramin’ny 2 janoary 2021. Miisa 16 ireo olona maty tsy nandalo tao amin’ny hopitaly. Raha atambatra ny antontanisa, mahatratra 21 ny isan’ireo olona namoy ny ainy tao Toamasina.Sajo sy J.CL’article Akon’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao – Toamasina: nahazo vahana ny tsatok’antsy, miisa 21 ireo maty a été récupéré chez Newsmada.
Lamaody sy famoronana: nampahafantatra ny collection Hippie i Shi Rakout
Nampahafantatra ny collection Hippie, ny faran’ny herinandro teo teny Ambatobe ny mpamorona lamaody Sih Rakout. Niompana kokoa amin’ny kolontsaina sy ny mozika ny vokatra natolotra, izay nampisongadina ny fahafahana fototry ny toe-tsaina Hippie. 45 ny akanjo ahitana manteau, veste, arotenda… mampisongadina ny loko marevaka sy mihaja nefa mifandray amin’ny fiainana andavanandro ihany satria misy capuchon, mampiasa ny akora Jean. Nampivadiany ny akora maromaro (lin, soie, laine, velours, coton…) nanome ny collection Hippie nampisalorana ny mpilatro efa matihanina vavy sy lahy avy ao amin’ny Agence Totem. Mpamorina vehivavy mbola tanora nampiseho ny sanganasany voalohany, ny taona 2017 i Shi Rakout tamin’ny collection Ala. Telo taona talohan’izay ny tenany no nanapa-kevitra fa hiditra amin’ny tontolon’ny lamaody sy ny famoronana. Manavanana azy ny mamorona amin’ny akora lin, soie, coton izay jifain’ny Malagasy sy vahiny. Nandravaka ny akanjo ny firavaka samihafa sy ny poketra avy amin’ny Fashion ethnique.Mbola sarotra ny mikarakara filatroana amin’izao fotoana izao satria tsy ao anatin’ny toe-tsaina malagasy ny mahita mpilatro mandehandeha mitondra ny akanjo sady afaka maka sary ihany koa ny mpakasary ao anatin’izany rehetra izany, hoy i Sih Rakout.Vonjy A. L’article Lamaody sy famoronana: nampahafantatra ny collection Hippie i Shi Rakout a été récupéré chez Newsmada.